Ilay voay haterina any amin’ny farihin’Antsarako Belalanda
jeudi, 03 septembre 2015 23:39
Toliara : Voay nampisahotaka ny iray tanàna
Nisy voay iray lehibe hitan’ny olona nikarenjy tao Mahavatse I ny zoma teo. Nosamborina avy hatrany ilay biby ary nogiazana tao amin’ny biraon’ny Zandary Tsianaloka. Androany antoandro ity biby ity no naterin’ireto farany any amin’ny farihin’Antsarako Belalanda, avaratr’i Toliara. Raha ny fanazavana dia voay nompiana mpimasy izy io no tafaporitsaka. Rehefa nofotorana ny tompony dia nilaza fa fakany ody gasy mahery io voay io, ary rehefa tena lehibe dia hovonoiny hakany ny hodiny sy hakana mena-boay havadika vola.
Jean Pierre notantanana tonga teny amin'ny Lapan'ny Fitsarana Anosy
mercredi, 02 septembre 2015 15:33
Raharaha «Jean Pierre» : Amin’ny zoma 4 septambra ny didy
Niakatra Fitsarana ny fiandohan’ny tolakandro teo i Jean Pierre, ilay tovolahy mpianatra taona voalohany amin’ny lalampiofanana Malagasy eny Ankatso, nosamborin’ny Emmo-Reg tamin’ny fomba mahery vaika ny alatsinainy 31 aogositra teo. Jean Pierre mikotringa sady reraka dia reraka no nanoloana ny mpitsara. Maroloha ny vesatra niampangana azy, anisany ny fanoherana sy ny fitorahana mpitandro ny filaminana. Naharitra ora iray sy sasany teo ny fifandaharana, nanomboka tamin’ny iray ora.